Allgedo.com » Marxuum Marshaale oo magaalada Muqdisho lagu aasaayo.
Home » News » Marxuum Marshaale oo magaalada Muqdisho lagu aasaayo. Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Waxaa lagu wadaa in maanta Magaalada Muqdisho lagu aaso Allaha u naxariitee majaajiliistihii caanka ahaa Marshaale oo xalay magaalada Xamar lagu dilay.
Sidoo kale waxaa aaska marxuumka ka qeyb gali doona Fanaaniinta ku sugam magaalada Muqdisho iyo sidoo kale shaca aad u badan oo aad u taageeri jiray Marxuumka.
Si kastaba ha ahaatee dilka Marshaale waxaa si kulul u cambaareeyay qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ay dadkaasi dowladda ka dalbadeen in dilkaasi dadkii geestay cadaalada la horkeeno.